Uyathuthuka umculi weqgqomu waseMbali | News24
Uyathuthuka umculi weqgqomu waseMbali
UMCULI wegqomu osafufusa waseMbali uMnuz Menzi ‘Brendix’ Msomi (34) uthi ufuna umculo wakhe ugcine usudlalwa phesheya kwezilwandle.
Ingoma yakhe esihloko esithi Gqom Nation ingezinye yezingoma ezingama-48 ezishisa izikhotha kwi-album yaku-iTunes.
Lengoma isohlwini nezinye zabaculi abahamba phambili eMzansi Afrika okubalwa kubona u-Babes Wodumo, uDladla Mshunqisi, u-Dj Tira nabanye.
Ekhuluma ne-Echo uthe kwakuyiphupho lakhe ukuthi ngelinye ilanga umculo wakhe waziwe umhlaba wonke.
“Ukucula ngakuqala ngisemncane njengoba kuyinto engiyithandayo. Ukuqala kwami kwakuyinto ewumdlalo nje ngoba sasizibhalela imibhedo eklasini nabangani bese sithi izingoma kanti angazi ukuthi thalente lami lilele lapho.
“Ukubona umculo wami usumatanyiswa nowabaculi abakade bafika kulendima nasebedumile kuyangijabulisa ngoba kuyakhombisa ukuthi umsebenzi uyaphusheka. Angifuni-ke ukuthi umculo wami ugcine ngokudlala kulezi zinhlelo, ngifuna ukuthi ngigcine sengihambela amazwe angaphandle ngiyobadlalela umculo wami ngoba ngiyakholelwa ukuthi usazokhula.”
U-Brendix uthe wakhipha i-demo yokuqala ngo-2000.
Uthe kuno-Dj baphesheya kwezilwandle asebeke bamuthumelela ama-emails becela ukusebenzisana naye kwi-album yakhe nathe akakabi naso isiqiniseko sokuthi uzoyishicilela nini.